ငါကလူမိုက်ပဲ | Martech Zone
စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 30, 2006 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
တီထွင်သူ။ စီးပွားရေးသမား ပါရမီရှင်။
“ မင်းဘယ် Superhero တွေလဲ” ယူဖို့ဒီမှာနှိပ်ပါ။ ဉာဏ်စမ်းပဟေ…ိ ...
30:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 11, 22 တွင်
အိုကေ၊ စိမ်းလန်းတဲ့အပိုင်းက ငါမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အားကောင်းမောင်းသန်တဲ့ လမ်းလျှောက်တဲ့အပိုင်း- ဟုတ်ပြီ၊ အစွမ်းထက်တဲ့အပိုင်းက ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုပေမယ့် လမ်းလျှောက်တဲ့အပိုင်း- ဟုတ်ပြီ၊ ငါအိမ်ပြန်ရောက်တာ မကြာသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့် ခရီးသွားရတာ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာစုအတွင်း!
30:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 11, 38 တွင်
ကိုယ်လည်းပဲ! ပြီးတော့ မင်းငါ့ရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ Black Sabbath ခေါင်းစဉ်ကို သုံးနေပြီ။ 😉
ဇန်နဝါရီလ4ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 1 နာရီ 30 မိနစ်
ခေါင်းပူတယ်။ သင့်တွင် ခိုင်မာသော စွမ်းအားနှင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းရှိသည်။ - အစိမ်းရောင်မီးအိမ်
... ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဟီးရိုးတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။
စွမ်းအားရှင် – ဟုတ်တယ်။ ငါ့ဘဝဇာတ်ကြောင်း။
ခေါင်းပူခြင်း – ငါမျှော်လင့်ထားသလိုမဟုတ်တဲ့အခါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။
စိတ်ကူးဉာဏ်ကောင်းခြင်း – ပရိုဂရမ်မာ၊ ဂစ်တာသမား၊ ဆောက်လုပ်သူသည် နေ့၏အချိန်ကို ခြေရာခံလိုက်သည်… အမြဲတမ်းအိပ်မက်မက်သူဖြစ်သည်။
မေလ 2, 2008 မှာ 12: 38 AM
Green Lantern ဖြစ်ခြင်းက သိပ်မဆိုးပါဘူး၊ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး စူပါဟီးရိုးကတော့ Nate ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။